June 21, 2019 - Update New
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး ရွေးယူသင့်သလဲ ?
June 21, 2019 Naing 0
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး ရွေးယူသင့်သလဲ ? သား အတွက် အဖေ့ရဲ့အကြံပြုချက် ငါ့သား… အိမ်ထောင်ဖက် ရှာနေတယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့ ရင်သားနဲ့တင်ပါး အရွယ်အစားအတွက် မင်း စိတ်မပူနဲ့…နှလုံးသား နဲ့ဦးနှောက် အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။သူမရဲ့ချစ်မေတ္တာနဲ့ သည်းခံစိတ်အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။ နောက် […]
ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် အဖမ်းခံထားရမှ ကျွဲရိုင်းဗူးမှ Land Cruiser ကားကံစမ်းမဲပေါက်
ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် အဖမ်းခံထားရမှ ကျွဲရိုင်းဗူးမှ Land Cruiser ကားကံစမ်းမဲပေါက် အဖမ်းခံထားရသော တရုတ်နိုင်ငံသား ကျွဲရိုင်းဗူးမှ ကားကံစမ်းမဲပေါက် မြဝတီ ဇွန် ၂၁ တရုတ်နိုင်ငံသား မောင်းနှင်လာသော Land Cruiser က မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို နောက်က တိုက်မိပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပါ လူ ၁ […]
ဝိုင်တစ်ခွက်သောက်ခြင်းက GYM တစ်နာရီခန့်ဆော့ခြင်းနဲ့ ညီမျှနေ
ဝိုင်တစ်ခွက်သောက်ခြင်းက GYM တစ်နာရီခန့်ဆော့ခြင်းနဲ့ ညီမျှနေ က​နေဒါနိုင်​ငံ Alberta တက္ကသိုလ်​မှ သု​သေသနပြုလုပ်​ချက်​​တွေအရ ​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​တဲ့အခါမှထွက်​တဲ့ Resveratrolဆိုတဲ့ကျန်းမာ​ရေးအ​ထောက်​အကူပြု ဓာတ်​တစ်​မျိုးကို ဝိုင်​နီမှာလည်း​တွေ့ရတယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။ ဂျင်​​ဆော့တာဟာ ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှားမှုကို သက်​​တောင့့်​သက်​သာဖြစ်​​စေပြီး နှလုံးအလုပ်​လုပ်​ပုံ ကြွက်​သားသန်​မာမှု​တွေကို ​တိုးတက်​​ကောင်းမွန်​​စေပါတယ်​။ ဝိုင်​နီမှာပါတဲ့ Resveratrol ဟာလည်း တူညီတဲ့ရလာဒ်​​တွေကို ​ပေးစွမ်းတယ်​​လို့ဆိုပါတယ်။ ဝိုင်​နီ […]
ဇွန် ၂၂ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မီးမပျက်တော့
ဇွန် ၂၂ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မီးမပျက်တော့ ဇွန် ၂၂ ရက်(စနေနေ့)မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် လျှပ်စစ်မီးအလှည့်ကျပေးသည့်စနစ် ဖျက်သိမ်းပြီး အချိန်ပြည့် ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးမြင့်က News Watch ကို ပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ […]
တံတားပေါ်ကနေ ခုန်ချမလို့လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ကယ်တင်ပြီး တိတ်တိတ်လေး ထွက်သွားခဲ့တဲ့သူတစ်ဦး(ရုပ်သံ)
တံတားပေါ်ကနေ ခုန်ချမလို့လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ကယ်တင်ပြီး တိတ်တိတ်လေး ထွက်သွားခဲ့တဲ့သူတစ်ဦး(ရုပ်သံ) ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကာက်မြို့ဗဟိုရိုသင် လမ်းမ ကုန်းကျော်တံတားမှာ စိတ်ကြွစွဲနေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတံတားပေါ်ကနေ ခုန်ချမလို့ လုပ်နေတာကို( အဖြူရောင်ဝတ်ထားသူ )အမျိုးသားတစ်ဦး က ကယ်တင်လိုက်တဲ့ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဖခင်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ဖို့ တစ်ရက်ကို ထမင်း (၅) နပ် မဖြစ်မနေစားနေရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေး
ဖခင်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ဖို့ တစ်ရက်ကို ထမင်း (၅) နပ် မဖြစ်မနေစားနေရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေး အဖေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့တစ်ရက်ကိုထမင်းငါးနပ်အ၀စားနေရတဲ့ကောင်လေး တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူရှီးခွမ် ဆိုတဲ့ကောင်ကလေးရဲ့အဖေဟာ ရိုးတွင်းခြင်ဆီနည်းပါးမှုကြောင့် ဆေးရုံရောက်ခဲ့တာ ၇နှစ်ကျော်ပါပြီ။ သူရဲ့ရောဂါကြောင့်ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသမှုကို ခံယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက် သူနဲ့ကိုက်ညီမယ့်ရိုးတွင်းခြင်ဆီကိုရဖို့ သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကိုက်ညီတဲ့သူက သားဖြစ်သူနဲ့သာကိုက်ညီမှုရှိခဲ့တာပါ။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသဖို့ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန် […]
မိသားစုချင်းနားလည်မှုလွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းတွေကို အလုံးစုံ ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းဖခင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ဟာ ဖခင်ရဲ့ အိမ်နှင့်ခြံကို ယူငင်ပေါင်နှံထားတဲ့သတင်းတွေဟာ မနေ့အချိန်က ဖေ့ဘုတ်လူမှုတခွင်မှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ပျံ့နှံ့ခဲ့တာပါ။ မကြာခင်ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် အိမ်နှင့်ခြံကိုလည်း ဖခင်ဖြစ်သူက ပြသထားပြီးတော့ သားဖြစ်သူ ပိုင်ဇေရဲထွန်းကို စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါ ရေးသားထားခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ ဒီကနေ့ မှာတော့ […]
ဦးလေးဖြစ်သူက အသက် (၂)နွစ်အရွယ်တူမေလးကို လေပေါ်မွှောက် ကစားမိရာမွ တူမေလးသေဆုံး
ဦးလေးဖြစ်သူက အသက် (၂)နွစ်အရွယ်တူမေလးကို လေပေါ်မွှောက် ကစားမိရာမွ တူမေလးသေဆုံး အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် ဦးလေးဖြစ်သူက တူမလေးကို ချစ်လွန်းလို့ လေပေါ်မြှောက်လိုက်၊ ဖမ်းလိုက်နဲ့ ကစားမိရာက တူမလေးမှာ မတော်တဆ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရပါတယ်။ တူမလေးဟာ အသက်(၂)နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီသတင်းက အချစ်ကြမ်းတဲ့ ကလေးချစ်သူတွေ သတိထားရမယ့် […]
လူတိုင်း အ​နုပညာဖန်​တီး​ပြီး ​နေထိုင်​သွားဖို့လိုအပ်​​​ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ​ထောက်​ခံထားတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း ၅ ချက်​
လူတိုင်း အ​နုပညာဖန်​တီး​ပြီး ​နေထိုင်​သွားဖို့လိုအပ်​​​ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ​ထောက်​ခံထားတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း ၅ ချက်​ လူတိုင်းမှာ အနုပညာဗီဇစိတ်​နဲ့ ဗီဇအခံရှိနှင့်​ပြီးသားဖြစ်​ပါတယ်​။ အခု​ပြောပြမယ့်​အ​ကြောင်းအရာ​က​တော့ အနုပညာတစ်​ခုခုမှာ ​ပျော်​ဝင်​စီးဆင်းကြတဲ့အခါ ဘဝအတွက်ဘယ်​​လောက်​အ​ထောက်​အကူပြုလဲဆိုတာ သိ​စေလိုရင်းပါ။ ကျွမ်းကျင်​မှုရှိလား၊ မရှိလားဆိုတာနဲ့သက်​ဆိုင်​မှုမရှိဘဲ လူတိုင်းလိုလို အ​နုပညာဖန်​တီး​ပြီး ​နေထိုင်​သွားဖို့လိုအပ်​​​ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ​ထောက်​ခံထားတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း ၅ ချက်​ […]
“ဂီတအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ရင်း မိဘနှစ်ပါးကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ Hazel “
“ဂီတအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ရင်း မိဘနှစ်ပါးကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ Hazel “ ဟေဇယ်ကတော့ Winner ဆုမရပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ဂီတအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို အရာထင်အောင်သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော်ကိုလည်း အရမ်းလေးစားတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြလာပါတယ်။ The Voice Myanmar (Season 2) […]